Monday December 12, 2016 - 08:20:13 in Wararka by
Wararka ka imaanaya magaalada Banghazi oo ah caasimadda 2-aad ee wadanka Liibiya ayaa sheegaya in tobaneeyo katirsan maleeshiyaadka howlgalka Al-karaamah lagu dilay silsilado qaraxyo ah.
Ugu yaraan 13 Askari oo 5 kamid ah ay ahaayeen hoggaamiyaal melleteri ayaa lagu dilay qaraxyo ka dhacay mandiqadaha kala ah Buu Saneyt iyo Qunfuudah oo dhaca Galbeedka iyo waqooyiga magaalada Banghazi.
Telefeshinka Al Jazeera ayaa baahiyay in 20 askari ay ku dhaawacmeen qaraxyada, askarta iyo saraakiisha la beegsaday waxay katirsanaayeen guutada ciidanka gaarka ah ee qaabilsan la dagaalanka waxa loogu yeero Argagaxisada.
Khasaarahan gaaray ciidamada Khaliifa Xiftar waxay imaanayaan laba maalin kadib markii qaraxyo isla Banghazi ka dhacay lagu dilay 8 askari.
Xiftar oo ah Jeneraal isku magacaabay la dagaalanka waxa loogu yeero Argagaxisada Liibiya ayaa dadaal ugu jira sidii uu xoogaga islaamiga iyo kacdoonka ugala wareegi lahaa Banghazi iyo hareeraheeda wuuuna taageera caalami ah ka heystaa wadamada reer galbeedka iyo dowladaha khaliijka carbeed.